Puntland oo maanta shaacisay xilliga ay bilaabayso tallaalka Covid-19 | Somali Link Newspaper
Guriga Breaking News Puntland oo maanta shaacisay xilliga ay bilaabayso tallaalka Covid-19
Puntland oo maanta shaacisay xilliga ay bilaabayso tallaalka Covid-19
Sabti, Maarso, 20, 2021 (HOL) – Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay in ay tallaalka Covid-19 billaabandoonaan 27 march, inta ka horraysana ay sameyn doonaan diiwaan galinta dadka qaadanaya.
Dowladda federalka Soomaaliya ayaa Puntland u soo dhiibtay 40,000 oo kamid ah tallaalka Covid-19, kadib markii hay’adda caafimaadka adduunka ay Soomaaliya u keentay 300,000 tallaalka Covid-19.
Wasiirka caafimaadka Puntland ayaa sheegay in macalimiinta iyo ciidamadu ay safka hore kaga jiraan dadka ka faa’idaysandoona tallaalka Covid-19, isagoo sheegay in muddo toban cishe ah uu tallaalka socondoono.
Puntland ayaa kamid ah meelaha aadka ugu faafayo cudurka Covid-19, inkastoo wasaaradda caafimaadka Puntland aysan bixin macluumaad joogto ah.
Article horeKenya feels betrayed by Somalia over maritime dispute
Article soo socdaSaldhiga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo la hoos geeyay taliska qeybta gobolka Banaadir